रेशम चौधरीको रिहाइप्रती प्रधानमन्त्री नरम, जसपासंग सत्ता सहकार्य ! : RajdhaniDaily.com -
Home भर्खरै रेशम चौधरीको रिहाइप्रती प्रधानमन्त्री नरम, जसपासंग सत्ता सहकार्य !
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बीच सत्ता सहकार्य हुने भएको छ । जसपाले उठाउँदै आएको मागप्रति प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सकारात्मक रहेकाले सता सहकार्य हुने भएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओली र जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरबीच बिहीबार भएको छलफलमा दुई पक्षबीच सहमतिको ढोका खोल्ने समझदारी भएको हो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा दुवै दलले गठन गरेको कार्यदलका सदस्यसमेत सहभागिता रहेको थियो । ओली र ठाकुरबीच छलफल सकेर बिहीबार साँझ कार्यदलको संयुक्त बैठक बसेर अहिलेसम्मको प्रगतिका विषयमा समेत छलफल भएको छ ।
छलफलमा सहभागी एमाले संसदीय दलका उपनेता तथा कार्यदलका सदस्य सुवास नेम्वाङले परिणाममुखी वार्ता भएको बताए । शीर्ष नेताका साथै कार्यदलका बीचमा भएको छुट्टाछुट्टै छलफल सकारात्मक रहेको बताउँदै उनले केही दिनमै परिणाम दिने गरी काम हुने बताए ।
‘छलफल सकारात्मक छ । केही दिनभित्रैमा परिणाम दिने गरी हाम्रो गृहकार्य भइरहेको छ,’ नेम्वाङले राजधानीसँग भने, ‘हामी छलफललाई निरन्तरता दिने र उहाँहरूले उठाउँदै आएका माग सम्बोधन गर्नतर्फ अघि बढेका छौं ।’
एमालेबाट संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङ, अर्थमन्त्रीसमेत रहेका उपमहासचिव विष्णु पौडेल, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार राजन भट्टराई र जसपाबाट नेता लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला वार्ता टोलीमा रहेका छन् । यो वार्ता टोलीको छलफल निरन्तर जारी रहेको छ ।
जसपा कार्यकारिणी समितिका सदस्यसमेत रहेका वार्ता टोलीका सदस्य कर्णले आफूहरूले उठाउँदै आएको माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री ओली सकारात्मक रहेको बताए । सांसद चौधरीको रिहाइ, मुद्दा फिर्तालगायतका माग सम्बोधन गर्न प्रक्रिया अघि बढेको उनले बताए ।
‘हाम्रा माग सम्बोधन गर्न प्रक्रिया अघि बढेको छ । हाम्रो छलफल सकारात्मक रूपमा अगाडि बढाउने सहमति हामीबीच भएको छ,’ कर्णले राजधानीसँग भने, ‘प्रधानमन्त्री आफैं हाम्रो माग सम्बोधन गर्न निरन्तर लागिरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले जसपासहित नेकपा (माओवादी केन्द्र)सँग मिलेर सरकार निर्माण गर्न खोजेको छ । तर, जसपा भित्रै दुई धार निर्माण भएपछि त्यो सम्भव देखिँदैन । यता एमालेले जसपाले उठाउँदै आएको माग सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि ओली नेतृत्वको सरकारमै जसपासमेत सहभागी हुने टिप्पणी राजनीतिक वृतमा भइरहेको छ ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सुस्त भएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले समयमै सक्न निर्देशन दिएको छ । आयोजना प्रमुखसँग चरणबद्ध छलफल गर्दै आयोजना...
युरोकप १२ देशको १२ सहरमै
विश्वव्यापी बनेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण अर्काे वर्षलाई सरेको युरोकप युरोपको १२ देशको १२ सहरमा नै आयोजना हुने भएको छ । युरोपियन फुटबलको...
प्रदेश २ सुभाष साह - September 21, 2020 0
सप्तरीको । सप्तरीको रुपनी गाउँपालिका वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष गोविन्दसिंह थापा मगरको आज ५४ वर्षका उमेरमा निधन भएको छ । केही महिनादेखि बिरामी...
लमजुङ । लमजुङको एक विद्यालयमा चट्याङ पर्दा एक विद्यार्थीको मृत्यु भएको छ भने दुई जना घाइते भएका छन् । क्व्होलासोंथर गाउँपालिका– ४, भुजुङको त्रिभुवन...
खेल सुभाष साह - December 30, 2020 0
लन्डन । स्पेनिस ला लिगामा गएराति भएको खेलमा बार्सिलोना एइवरसँग बराबरीमा रोकिएको छ । दुवैतर्फ १-१ गोल भए । खेलमा एइवरका लागि किके गार्सिया...
Not-to-be-missed सुभाष साह - November 21, 2020 0
रुपन्देही सामूहिक हत्या : चारित्रिक हत्याले निम्ताएको घटना
Editor-Picks सुभाष साह - June 11, 2020 0
बुटवल । रुपन्देहीको तिलोत्तमामा भएको सामूहिक हत्या व्यक्तिगत चरित्रमाथि उठाएको प्रश्नका कारण उत्पन्न आवेशले घटाएको देखिएको छ । प्रदेश ५ प्रहरी कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ...
अर्थ सुभाष साह - March 13, 2020 0
Editor-Picks सुभाष साह - November 30, 2020 0
खेल सुभाष साह - September 4, 2020 0
काठमाडौं । नेपाली खेलाडी सन्दिप लामिछानेआवद्ध जमैका तलावाज क्यारेबियन प्रिमियर लिग (सिपिएल) टी २० क्रिकेटको सेमिफाइनलमा पुगेको छ । आज बिहान सम्पन्न खेलमा गुयाना...
प्रदेश सुभाष साह - June 21, 2020 0
पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा कोरोना भाइरसबाट कुल संक्रमित ५ सय २३ पुगेका छन् । आइतबारमात्रै ३५ जना थपिएका हुन् । तीमध्ये पोखरामा थप १...
प्रदेश ३ सुभाष साह - February 16, 2020 0